Chitatu, September 15, 2010 China, June 18, 2015 Adam Mudiki
Vhiki rapfuura, ini ndaive panhanho paMubatanidzwa - 2010 inonzi Enda Kumadokero: Vaimbove Midwesterners vakatamira kuSilicon Valley vanogovana nyaya dzavo. Ini ndaive mumwe wevanhu vana vaikurukura zvedu nyaya dzega uye zvakamutsa dutu remoto paTwitter ndokuenda Katsi 4 apo Doug Karr akatumira maitiro ake paakadzokorora Sanganisa 2010 pano.
Manzwiro ese aya aipembedzwa chose kupihwa hunhu husina kudzika hwefomati, iyo yakaibva kune cheeky kurira-kuruma, asi isingakwanise kujekesa chokwadi pane chimwe chinhu chinokodzera maminetsi anopfuura gumi ekutaura zvega pamunhu. Doug Karr anga ane nyasha huru mukundipa mukana wekupinda muiyi hurukuro kuti ndipe maonero angu - kwete nezve zvakadzika kuCombine - asi kuimisazve kubva pagakava pakati peWest vs Midwest (neni ndiri muchikamu che Drago) kune iyo inopa zvakadzama kutenderedza bhizinesi pano muSan Francisco uye kuMidwest (mune yangu Bloomington, IN).
Ini ndinofunga kune zvidzidzo, zvinoenderana nekushoropodzwa, izvo zvinogona kupa mikana mune izvi zvedu tese zvisinei nekuti tiri kudivi ripi. Mushure mezvose, ko iyi haisi yeimwe yeakakosha mbiru dzezvemabhizimusi?
Zvakagovaniswa Zviitiko Zvinoumba Nharaunda Yedu uye Tsika
Nharaunda yekuMadokero uye kuMidwest ese ari maviri akakosha zvakaenzana munzvimbo mbiri idzi, asi kune maapuro kumaorenji achienzanisa kana zvasvika pamasimba ekugadzira kwavo. Yangu nyaya inowirirana nevazhinji kunze kuno: kubuda kunze kweWestani idimikira rinoshanda iro rine hupfumi uye hwakasimba nhoroondo mukusimudzira kwenyika yedu. Kusiyana naLewis naClark, hapana munhu nhasi ari kutasva achikwidza kumusoro, achirwa nema grizzly bears uye kutaurirana nzira neanorwa MaIndia MaIndia ekuAmerica, asi saivo, isu tese tinogovana pfungwa yakafanana yekusangana - kusangana nevanhu, nharaunda uye needu pachedu nezvatisingakwanise patinozviisa panjodzi dzekusiya rugare rwemba tichienda kuMadokero. Havasi vazhinji vedu vanobva kuno, asi isu tinovaka nharaunda yedu kubva pazviitiko zvakajairika kupfuura izvo zvetsika senge mutauro, kosi yehupfumi nehupfumi, ruvara uye kuvenga Kanye West.
MuMidwest, nharaunda ndeimwe yeakasimba uye anokosheswa maitiro eiyo chero tsika pasi. Vanhu vari kuMidwest vanokoshesa kuva neumwe neumwe musana, kuva vanogamuchira vaeni zvakanyanya (kunze kwekunge uri kuOhio St - Mich nhabvu mutambo), uye kugara uchiwana basa riitwe nepadiki fanfare sezvinobvira (Kana Indiana University yakamboisa mazita kumashure yemajezi avo, handingashamiswe kana Bloomington ikashanduka ikaita murwi wedombo reraimu). Iyi pfungwa yenharaunda ine simba rakanyanya, chingave chiito chekupenga kusiya zvese kumashure kuti uende kunzvimbo yaunogona kubhadhara $ 1,700-pamwedzi kuti ugare mubhokisi reshangu pamusoro peiyo inoshanda yekukanganisa-mutsara.
Nekudaro, nharaunda dzese dziri mbiri dzakasimba kwazvo zvisungo, asi hunhu nezvakaitika zvinogadzira izvo zvisungo zvinoburitsa zvakanakira nekukanganisa kubhizimusi. Munguva pfupi, Indiana parizvino iri parumananzombe.
Ngozi uye Mubairo
Mune yakanyanya underrated Ini zita rangu hapana, protagonist "Hakuna Munhu" (akatamba naTerrance Hill) anotora mabara maviri kuburikidza neangu ngowani yemombe kubva kuListary gunslinger Jack Beauregard (inoridzwa naHenry Fonda), kuratidza kwake chikwereti kwaari. Iyo dialog yavanopanana yakajeka:
Jack: Ndiudze, chii mutambo wako?
Hapana munhu: Pandakanga ndiri mudiki, ini ndaiwanzo kunyepedzera kunge ndaive Jack Beauregard.
Jack: … Uye ikozvino nekuti mese makura?
Hapana munhu: Ini ndakanyanya kuchenjera. Asi dzimwe nguva kumhanyisa njodzi, kunogona kuunza mibairo, ya unoziva.
Jack: Kana njodzi iri shoma, mubairo uri mushoma.
Musiyano mukuru kwazvo wandinonongedza mutsika pakati peMadokero neMidwest wakarara zvakaenzana mune ino axiom Mumakore maviri ekupedzisira ekupinda muwebhu uye netekinoroji nharaunda muIndy neBloomington, ndinogona kutaura zvine chokwadi, iyi ndiyo yega nyaya hombe Indiana inayo pakuve inotevera Boulder kana inotevera Silicon Valley. Izvi zvinoita kwete kureva izvozvo hapana iri kutora njodzi, kana kuti hapana zviitiko zvine musoro zviri kuitika muIndiana. Asi, zvazvinoreva, ndezvekuti chinhu chimwe chete chakakosha chekuvaka nharaunda yehunyanzvi yehunyanzvi hachisati chave kutengwa mune huru pfungwa njodzi nanhasi.
Iyo yakakosha chinzvimbo mune chero tech bhizinesi ndeye technical co-muvambi kana anotungamira anovandudza (duh). Iko kudiwa kwemhando idzi dzevanhu kunopfuura nekugovera kwavo, uye izvi ichokwadi muSan Francisco futi. Musiyano mukuru muIndiana, ndewekuti huwandu husina kutsarukana hwevanhu vane hunyanzvi hwehunyanzvi hwekuvaka webhu chigadzirwa vakapindura kune ino kugovera uye vanoda kusaenzana nekumisikidza "dev zvitoro" izvo "outsource" tekinoroji budiriro. Izvi zvinoda kuti vasiri vehunyanzvi vanamuzvinabhizimusi kuti vabudise mari yavo yese yakaoma yavakawana uye / kana equity kubhadhara mumwe munhu asina ganda mumutambo. Ndataura nevakagadziri vazhinji kubva kuIndy neBloomington avo vaigadzira mihoro inoshamisa avo vanofungawo kuti vamuzvinabhizimusi nekuti vanogadzirisa matambudziko ekutanga. Asi ivo havana chaizvo. Iwe hausi muzvinabhizimusi kudzamara warega rako kosi, kukanda ngowani yako mukati nevamwe vese uye nekuzvipira kusvikira wagadzira chimwe chinhu chinogadzira kukosha uye kuita mari. Kana iwe ukanyora W-2 gore rega rega, hausi muzvinabhizimusi.
Douglas Karr uye vamwe vazhinji vaita basa rinoshamisa pakusimbisa Indy seKushambadzira Tech hotspot. Izvo zvinotyisa. Zvisinei, vamwe vavambi vari kutsvaga kuvaka inotevera Facebook / Google / nezvimwe, vanoda tarenda rakakomba reinjiniya. Iri pano, asi haisi kupihwa zvakafanira uye zvinokurudzira hazvina kuenderana. Ndinoziva vakawanda vasiri-technical vanamuzvinabhizimusi muIndiana vanonyatsoda dev tarenda uye havagone kuitora kunze kwekunge vabhadhara mari kana kusiya chikwereti chisingazogara mutende kana chapihwa. Nekudaro, Indiana ichiri kurasikirwa nevatengesi vane tarenda zvakanyanya kuSan Francisco neMupata nekuti iyo conundrum haingove iri muhuwandu husingaenzanisike pano. Handisi kuti iwe "haugone kubudirira kunze kwekunge waenda kuMadokero." Zvandiri kutaura ndezvekuti zvave zvakanyanya kuomarara kune vasiri-tekiniki vatangi kuti vawane technical co-founders ivo vanofanirwa kukwikwidza neatanga-kumusoro uye makambani ekuMadokero asina nyaya imwechete.
Nhau dzakanaka dzeIndiana, zvakadaro. Zvinhu zviri kutanga kufamba, zvishoma nezvishoma, uye handifunge kuti ichi chichava chinetso mukufamba kwenguva. Kusvika papi? Handizive, asi dai ndaive muzvinabhizimusi muIndiana asingade kufamba kuMadokero, ndinenge ndichirova bhiza iri kudzamara radzikiswa kuita murwi wemamorekuru.
Zvemagariro Midhiya Ongororo Chikamu chechipiri - Kutarisisa paFacebook
Sep 15, 2010 na5: 14 PM
@dougheinz uri murume chaiye, Doug. Ini ndinonyatso kukoshesa iyo yekutarisira posvo uye inonakidza nzvimbo yekutarisa iwe yawakaunza kuiyi hurukuro. Ndingashinga nditi, iwe wanga uine tarisiro yakawanda kupfuura mamwe emazwi akashata epakati pekumadokero avo vakapinda mukati kundituka pane yangu posvo. Kutenda nekutora nguva!
Sep 15, 2010 na7: 13 PM
"West vs Midwest Round II" - yakanaka posvo na @dougheinz pane @ douglaskarr's blog.
Sep 16, 2010 na2: 06 PM
Ini ndakadzokera kuIndipolis mushure memakore matatu ne3 ne1 muNew York City kunyanya kujoina Raidious. Pane chiratidzo chimwe chetariro ipapo.
Pandakatanga kuenda kunze uko, ndaive nechip pabendekete rangu nezvekuti isu takangonaka pano sekune chero kumwe kunhu. Ini ndakakurumidza kudzidza kuti ichokwadi chaizvo, asi kutaura nezvazvo kunoita kuti unzwike sedunhu.
Mukuru wangu webasa haana kutenda kuti ndaibva kuMidwest nekuti ini "ndinofamba nekukurumidza, ndinotaura nekukurumidza," ndinotaura nemaoko angu, uye "ndakabudirira zvikuru." Yangu imwe dotpoti-mutsara mushumo waisakwanisa kana kudhirowa chimiro chenyika yeIndiana. Aya ndiwo maviri maNC lifers.
Nepo tarenda richiyerera zvakasununguka, tsika inowanzobva kune imwe yemahombekombe maviri. Icho ichokwadi. Uye yakawanda yenguva, tarenda rinoteera iro tsime retsika kune imwe yeaya maviri nzvimbo.
Kutsamwa uye kuzvipembedza haisiyo nzira yekuenda nayo. Basa rakanaka, Doug. Ndakafarira matauriro ako.
Kana pasina chimwe chinhu, ita sezvavanoita muNew York. Chero nguva chero munhu paanokupokana, vaudze kuti vaende ivo pachavo.
Sep 16, 2010 na3: 16 PM
Thanks murume. Yako inyaya yakasarudzika nyaya nezve zvinoitika kana vanhu vanobva munzvimbo dzakasiyana uye nharaunda vakanyatso kusangana pamwe nekupfuura kupfuura zvinofungidzirwa. Hupenyu hwakaomesesa kurarama seyedigologue, handizvo here?